Tsara hotsipihina anefa fa tsy misy akony avy hatrany ny fandraisana fivoriana iraisampirenena toy ny hita eto amintsika amin’izao fotoana izao, hoy ny profesora Radanoara Julien. Tsy maintsy jerena kosa ny lafiny toekarena amin’ny ankapobeny raha te-handrefy ny fahombiazan’io fampiantranoana ny fikaonandohan’ireo tany mampiasa ampahany na manontolo ny fiteny frantsay io isika, hoy ity manampahaizana eo amin’ny fifandraisana iraisampirenena ity. Anisan’izany ny resaka ara-barotra, ny fampiasambola, ny fizahantany na koa ny tsena fifanakalozana. Mialoha lalana hatrany ny tontolon’ny fifandraisana na diplaomasia ary manaraka kosa ny sehatry ny toekarena. Iaraha-mahalala, ohatra, ny toerana manerantany misy ny nosy Maorisy izay firenena modely eto Afrika misitraka ireo tombontsoa amin’ny fampiantranoana matetika fihaonana iraisampirenena, araka ny fanampim-panazavany.